Chiitiko cheApple munaKurume chaitove chakamiswa nekuda kwekonavirus | IPhone nhau
Chiitiko cheApple munaKurume chaitove chakamiswa nekuda kwekonavirus
Mamwe midhiya ari kuti kukanzurwa kwechiitiko icho chisina kana chibvumirano chepamutemo. Kune dzakawanda nhau dzatinowana mune iyi nyaya nezve izvo zvinokwanisika kukanzurwa kweshoko rakakosha raitarisirwa munaKurume 31 anotevera, saka kambani yeCupertino inogona kunge isiri kuita chiitiko chayo mwedzi uno.
Uye hazvisi zvekuti isu tanga tatova nememo patafura uye hapana chirevo chepamutemo kubva kukambani sezvo ivo vasina kuzivisa chero chinhu zviri pamutemo. Zvine musoro, vezvenhau vanoziva kuti munaKurume uno kazhinji ane Apple mharidzo, yekutanga yegore, asi panguva ino zvinoita sekudaro isu tichafanirwa kumirira kwenguva yakati rebei kuti tione nhau.
Uku kukanzurwa kwechiitiko kwacho hakusi kuti ndicho chinhu chinotishamisa tichiona huwandu hwe zviitiko zvichikanzurwa nehutachiona hweCovid-19Asi, zvakapesana sezvo iri yakananga chiyero chekudzivirira kutapukira kwevanhu vazhinji. Tinofanirwa kufunga kuti vanhu vanobva pasirese pasirese vanofamba vachienda kumashoko akakosha uye kune nzvimbo dzakaita seChina kana zvichangoburwa Italy, izvozvi hapana munhu anotenderwa kubuda munyika uye izvi zvinonetsa zvinhu zvese nevezvenhau, nezvimwe.
Haasi chaiwo ese mamiriro ekuchengetedza anosangana kuti aite chiitiko umo vanhu vanogona kutapukirwa neiyo nyowani coronavirus, saka chaizvo chisarudzo chakanakisa kudzosera zviitiko zvese izvi uye nekumirira. Ichokwadi kuti kambani yakaita seApple yakave nechirongwa chakaiswa mucherechedzo kubvira kutanga kwegore uye zvinonetsa kuronga nezvipingamupinyi izvi, asi kudzivirira kuri nani pane kurapa uye mune iyi Apple inodawo kuve muenzaniso kune kunyangwe isu tisinganyatso kuziva chero chinhu zviri pamutemo, zvinonyanya kuitika kuti mwedzi uno hatizove nehurukuro huru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Chiitiko cheApple munaKurume chaitove chakamiswa nekuda kwekonavirus
Zvese zvinoratidza kuti Apple AirTags inoshandisa bhatiri mabhatani
Maitiro ekusunungura kumusoro iCloud nzvimbo kubva kune yako iPhone